Tilmaamaha Safarka Al Ain Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Al Ain waa magaalada jardiinada ee Imaaraadka Carabta. Magaaladan oasis waxay ku dhowdahay, oo gebi ahaanba la midowday, magaalada Cumaan ee Buraimi. "Goobaha Dhaqanka ee Al Ain (Xafit, Hili, Bidaa Bint Saud iyo Oases Areas)" ayaa lagu qoray Liiska Dhaxalka Adduunka ee UNESCO.
Safarka Al Ain
Diyaarad ugu raac Al Ain
Madaarka Caalamiga ah ee Al Ain. Gegad diyaaradeed oo yar oo leh duulimaadyo yar (ilaa Kozhikode ee Hindiya iyo Qaahira). Duulimaadyada ugu badan waxay gaaraan garoomada diyaaradaha ee Dubai ama Abu Dhabi.
Sida ugu fudud ee Al Ain lagu gaaro waa bas laga soo raaco Abu Dhabi (140 km) iyo Dubai (100 km). Basasku waxay saacad kasta ka baxaan saldhiga basaska ee Abu Dhabi iyo saldhiga basaska ee Dubai, siday u kala horreeyaan. Imaanshaha saldhiga basaska ee Al Ain. Waxay ku qaadataa 2 hr (10 dirham Abu Dhabi, 15 dirham Dubai). Basasku waa ku nadiifsan yihiin qaboojiyaha waxayna istaagaan kalabar 10 daqiiqo.
Laga soo bilaabo Dubai saldhigga basaska ee taga Al Ain waa "Al Ghubaiba Bus Station".
From Dubai, waxaa jira basas yaryar oo laga heli karo saldhiga tagaasida Bur Dubai. Nadiifi gawaarida yar yar ee raaxada ah ayaa laga qaadayaa 20 dirham safarka 90-daqiiqo.
Sidee looga warwareegaa Al Ain
Tagaasidu aad ayey u fududahay in la helo oo raqiis ah (tagaasida duugga ah, tan buniga ah, 2.50 dirham oo lagu daray 1.00 / km; tagaasida lacagta ah ayaa ka qaalisan, laakiin waxay leeyihiin qaboojiyeyaal fiican iyo, badanaa, darawalada ku hadla Ingiriiska) Haweenka kaligood safraya waa inay gadaal fadhiistaan ​​oo aysan sheekooyinka la sheekeysan karin, maxaa yeelay wadayaasha baabuurtu waxay u turjumi karaan saaxiibtinimo.
Waxa kale oo jira adeegga basaska maxalliga ah.
Talooyinka Dalxiiska ee Al Ain
Al Ain wuxuu leeyahay goobo badan oo xiisaha u yeelan lahaa dalxiisayaasha:
Jebel Hafeet. Buurta labaad ee ugu dheer dalka Isutagga Imaaraatka Carabta (1350 m), Jebel Hafeet waxaa ku hareeraysan bannaano fidsan oo saddex dhinac ah, kuwaas oo awood u leh aragtiyo cajaa’ib leh, badanaa qorrax dhaca. Wadada dabaysha ugu saraysa hareeraha timaha waxay u leexataa 12 km. Waxaa jira seddex meelood oo nasasho ah oo la daawado, ka dibna meesha ugu sarreysa waxaa ku yaal meel baarkin weyn oo baarkin leh oo leh maqaaxi iyo 360-aragtida aagga oo dhan. Ka taxaddar wadada maaddaama darawalada qaarkood ay ku raaxaystaan ​​xiisaha qallooca oo ay aad u soo jeestaan. Waxa ku yaal hudheel (Mecure Hafeet) xagga sare, sidoo kale gunta cagaaran ee Green Mubazara Park iyo Ain Al Fada Free.
Geela Souq, Meel u dhow isgoyska Meyzad. Dayrka. Aagga Meyzad, oo qiyaastii 5 km koonfur ka xigta Al Ain, una dhow soohdinta Cumaan, sofka geela ayaa furan maalin kasta. Boqollaal geel ah ayaa la isu keenaa si ay u iibsadaan una iibiyaan. Dharka muxaafidka. Ganacsatadu waa kuwo saaxiibtinimo badan, badanaa carruurta. Ganacsatada carbeed ee aan ahayn kuwa khaliijka ayaa laga yaabaa inay weydiistaan ​​lacag (“baksheesh”) si ay ugu oggolaadaan carruurta inay ku fadhiistaan ​​awr. Ganacsato badan ayaa soo qaadi doona carruurta si loo sawiro. Free.
Matxafka Al Ain iyo Fort. Free. Wadada Al Ain Street (ama "Main Street" sida dadka deegaanka ugu yeeraan), qalcaddan waxaa loo dhisay si looga ilaaliyo oasis ka soo duulayaasha. Waxaa loo adeegsaday inay xarun u noqoto Sheikh Zayed markii uu xukumayay Gobolka Bariga Abu Dhabi, kahor intuusan u kicin Sheikh of Abu Dhabi lafteeda. Matxafku wuxuu dib u milicsanayaa qaabkii ay dadka gobolku u noolaayeen ka hor aasaaskii Imaaraadka.
Al Ain Oasis. Kan ugu weyn dhowr badeed oo gobolka ku yaal, oasisku wuxuu ka kooban yahay kumanaan geed timireed. Oasis-ku wuxuu dhex fadhiyaa inta u dhexeysa xaafadda weyn ee soqda ee magaalada hoose iyo waddada Al Ain. Wadooyin cidhiidhi ah oo mara oasis, si aad ugu dhex mari karto, ama aad u socon karto. Makhaayad yar oo laga cunteeyo / makhaayad (oo hadda xiran) ayaa ku taal bartamaha. Ku lugeynta aagga oasis inta badan waa wax fiican marka qorraxdu aysan si toos ah dusha sare uga bixin, maadaama geedaha timireed ay bixiyaan hooska qaboojinta Free.
Waxa laga qabanayo Al Ain
Waxa kale oo jira beero waaweyn oo lagu nasto iyo safari oo ku yaal Al Ain oo caan ku ah dalxiisayaasha soo booqda.
Xarunta Arabia. Xarunta dukaamaysiga qaaska ah ee haweenka ee ENB Group, oo ku taal Jabal Roundabout. Soojiidasho gaar ah oo loogu talagalay dharka dhaqameed ee Carabiga & dharka reer galbeedka ee haweenka iyo carruurtooda. (la cusbooneysiiyay May 2021)
Al Ain waxay leedahay seddex xarummo ganacsi:
Al Ain Mall (u dhow Xarunta Magaalada). Suuqa ugu weyn Al Ain. Waxay ka kooban tahay baraf barafka lagu ciyaaro, aagagga ciyaarta carruurta, iyo shineemo muujinaysa soosaaris cusub. (la cusbooneysiiyay May 2021)
Al Jimi Mall (agagaarka Jimi, oo u dhow dhismaha Dawladda Hoose (Baladiya Carabi)). Dhismaha waxaa loo dhisay sidii suuq khudradda iyo hilibka, laakiin waa la dayactiray oo waxaa dib loogu habeeyay suuq laga dukaamaysto oo layaableh. Waxeey heesataa isgoyska, Dukaan weyn oo aad ka heli karto wax walba oo ku yaal liiska wax iibsigaaga. (la cusbooneysiiyay May 2021)
Al Bawadi Mall. Suuqa ugu cusub, oo 15-daqiiqo u jira Hilton, waxaana ku yaal magacyo badan oo caan ah: Marks iyo Spencer; Kabaha; Muuqaal Cusub; Dukaanka ugu sarreeya iyo sidoo kale Carrefour labaad, Qalabka Ace iyo buug-yaraha Magrudy. Gold Souk ayaa halkan loo raray, suuqii geelana wuu dhow yahay. (la cusbooneysiiyay May 2021)
Al Ain sidoo kale waxay leedahay goobo dukaameysi oo kala duwan, Aagga Xarunta Magaalada (Main Street, Wadada Khalifa, Iyo Oud At Touba Street). Iibiyeyaashu waxay iibiyaan wax kasta oo ka yimaada alaabada carruurtu ku ciyaarto ee raqiiska ah iyo xusuusta ilaa dhir udgoon, beeyada Carbeed iyo dahab.
Xitaa Madow. Mudanayaal labis dhaqameed. 4 bandhigyo ah Al Ain. Iyada oo leh naqshadaha ugu badan ee Abhaya, dhammaan qolalka bandhigyada waxaa loogu talagalay maaddaama Istuudiyaha Carabiga ahi yahay soo jiidasho kale. (la cusbooneysiiyay May 2021)
Makhaayadaha Al Ain
Al Ain wuxuu marti u yahay noocyo kala duwan oo dhadhan iyo qowmiyadeed ah marka laga hadlayo cunnada. Cunnada Lubnaan / Carabtu badanaa waa kuwa ugu jaban; maqaayadaha hudheelada badanaa kuwa ugu qaalisan. Magaalada waxay hoy u tahay nooc kasta oo cunto dhakhso ah sida McDonald's iyo Hardees, laakiin wax yar baa jira oo dadka intiisa badani ka cunaan meelahaas. Qaar ka mid ah cuntada ugu fiican uguna raqiisan magaalada waxaa laga heli karaa maqaaxiyo badan oo Hindi ah. Qaybaha had iyo jeer waa deeqsi, qiimo hooseeya, iyo tayo aad u fiican. Cuntada Shiinaha ayaa ugu fiican makhaayadaha Shiinaha badan. Deganayaashu waxay u arkaan xulashada Al Ain inay ka badan tahay mid ku filan.
Inta badan maqaayadaha iyo makhaayadaha ayaa la geeyaa meel kasta oo magaalada ah. Gaarsiintu waa mid deg deg ah oo la isku halleyn karo oo marar dhif ah ayey ku kacdaa lacag dheeri ah.
Khudradleyda ayaa xulashada cuntada ee magaalada ka heli doonta mid aad u qancisa. Cunnooyinka khudradda u leh khudradda iyo digirta, noocyada kala duwan ee khudradda Hindida ee khudradda wanaagsan leh, iyo helitaanka diyaarinta saladhyada cusub waxay ka dhigayaan cunitaanka Al Ain inay tahay khibrad welwel la'aan ah. Hiliblayaasha adag ayaa dhib yar kala kulmi kara gudbinta baahidooda saxda ah, laakiin meelaha badankood waxay bixiyaan suxuunta vegan waxayna had iyo jeer diyaar u yihiin inay la macaamilaan macaamiil lacag bixinaysa.
Inta badan maqaayadaha wanaagsan waxay ku urursan yihiin waddada Khalifa.
Wadada weyn ee Mauteredh (Xisaab, sida ay dadka qaar qabaan) waxay leeyihiin makhaayado tiro badan oo u adeega Lubnaan ilaa cunnada Hindida.
Dalxiiska Dalxiiska Al Ain. (la cusbooneysiiyay May 2021)
Al ain Rotana (ee magaalada). (la cusbooneysiiyay May 2021)
Hilton Al Ain. (la cusbooneysiiyay May 2021)
ayla. (la cusbooneysiiyay May 2021)
Caffeedka Mercure, Jebel Hafeet,. Meel dalxiis oo ka kooban 125 qol oo ku taal buurta dusheeda ayaa aragti fiican ka bixineysa Al Ain. 300 dirham.
Xagee looga socdaa Al Ain
Waad uga gudbi kartaa xadka Cumaan.
gudaha Al Ain
Hoteelka Al Ain Rotana
Huteelka weyn ee Grand Jebel Hafeet Hotel Al Ain
eHalal Safarka Mart > Imaaraatka Carabta Xalaal Safar > Tilmaamaha Safarka Al Ain Xalaal